डिशहोम फाइबरनेट सेवा भरतपुर र गैडाकोटमा विस्तार
डिशहोम फाइबरनेटले नेपालकाे थप ४ स्थानमा आफ्नाे सेवा विस्तार गरेकाे छ । कम्पनीका बिक्री प्रबन्धक मनोज शर्माकाे अनुसार डिशहाेमले भरतपुर महानगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र गैडाकोटमा पुगेको हाे ।
उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको मागलाई मध्यनजर गरि आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको माग पूरा गर्न सन् २०२० मा ईन्टरनेट सेवा सुरु गरेको थियाे ।
नेपालका प्रमुख शहर काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, हेटौडा, ईनरुवा, ईटहरी, बर्दिवास, बुटवल, विरगंज ,धरान, जनकपुर, विर्तामोड, ढल्केबर, बनेपा, धुलिखेल, कलैया, लाहान ,भैरहवा पनौती, पोखरा र विराटनगर लगायत अन्य स्थानमा डिशहाेमकाे फाइबरनेट पुगिसकेको छ ।
यस्तै डिशहोम फाईवरनेटले ‘ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन’ योजना संचालन गरिरहेको छ । असोज ११ गते देखि लागु भएकाे यो योजना अन्तरगत डिशहोम फाईवरनेटको नयाँ कनेक्सन लिने चार जना भाग्यशाली ग्राहकहरु स्पेन घुम्न जान पाउने छन् ।
स्पेन जाने चार भाग्यशाली विजेताहरुको छनौट लक्की ड्र मार्फत गरिने छ । लक्की ड्रको प्रत्यक्ष प्रशारण रमाईलो टिभी, सरोकार टिभी, रियालिटी टिभी र डिशहोमको अन्य च्यानलहरुमा हुने छ ।
विद्युत प्राधिकरणले पायो ४९०.२ मेगावाटको अरुण–४ ज...
दुई महिनामा निर्यात ११५.४ प्रतिशतले बढ्यो, आयात ७५...
विश्वस्तरीय बन्यो नर्भिकको आइपिडी, विदेशी अस्पतालको ...
साहस हुनेहरू जिपलाइन चढ्छन्, नहुनेहरू भित्तो कोपर्छन् !
कात्तिक ७, २०७८
अब कुन नैतिकताले सर्वोच्चमा बस्ने राणाज्यू ? तत्काल राजीनामा गर्नुस्
विशेष सम्पादकीय: तपाईं गन्हाउनुभयो, अब राजीनामा गर्नुस् प्रधानन्यायाधीशज्यू !
यी १० रोगका लागि बरदान हो हींग
तपाईँले हातले खाना खानुहुन्छ कि चम्चाले, हातले खानु खानु किन छ फाइदा ?
आँखामा आनो आउने समस्या छ ? यो समस्याबाट मुक्ति पाउँने केही घरेलु उपाय
पत्थरीको समस्यामा भएकाले प्याज खानु फाइदाजनक
यी फलफूलको बोक्रा फाल्ने गर्नुभएको छ ? छन् उपयोगी
फेरी लगाउँदै आएका धनकुमार जोगी